Fantastic Beasts ရုပ်ရှင်၏ Johnny Depp နေရာတွင် Grindel Wald Matts Michelson ကို တရားဝင်‌ရွေးချယ်ခဲ့သည်!
ရုပ်ရှင် Fantastic Beasts စီးရီးမှ ထွက်သွားခဲ့သည့် Johnny Dapp နေရာတွင် သရုပ်ဆောင် Matts Mickelson သည် လျာထားခံရသူများထဲမှ အရွေးခံရကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်ဟု Warner Brosက တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ Matts Michelson သည် Johnny Dapp မှ Grindelbard ၏ နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်မည်။Warner Bros မှ ထွက်သွားခဲ့သည့် ပုံစံဖြင
ENT | Nang 기자 | 2020-11-26 20:04
'Sea Police 2' 'Lee Beom-soo x Jo Jae-yoon x Joo-wan x Lee Tae-hwan တို့ ၄ယောက်၏ 'Bromance' ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံး ထုတ်လွှင့်သည်။
'Sea Police 2'သည် ပင်လယ်ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ၀မ်းနည်းမှုများကို သရုပ်ဖော်သည့် လက်တွေ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီးသူများသည် ပင်လယ်ကာကွယ်ရေး၊ ရေကြောင်းလုံခြုံရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစသည့် လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူကြသည်။ MBC Every1 'Police Seri
ENT | Nang 기자 | 2020-11-26 20:02
'Sing Again' သည် ကြည့်ရှုနှုန်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်ခဲ့သည် • အမည်မသိအဆိုတော်၏ 'နောက်တစ်ကြိမ်' အခွင့်အရေး
'Sing Again' သည် ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ စတင်ကာ JTBC ၏ ဖျော်ဖြေရေး ပရိုဂရမ်အသစ်ဖြစ်သည်။ အသိအမှတ်မပြုသေးသော အရည်အချင်းရှိသောပါရမီရှင်များနှင့် နာမည်ကြီးခဲ့သော အဆိုတော်များဖြစ်သော်လည်း ယခုမေ့နေပြီဖြစ်သော အဆိုတော် စသည် 'နောက်တစ်ကြိမ်' အခွင့်အရေး လိုအပ်သော အဆိုတော်များသည် လူထုရှေ့ စတိတ်ပေါ် ပြန်လည် တက်န
ENT | Khaing 기자 | 2020-11-25 18:48
ပေါ့ပ် ဘုရင်မ Beyonce သည် (၆၃) ကြိမ်မြောက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲတွင် (၉) ခုအမြင့်ဆုံး record စသည်တွင် လျာထားခြင်းခံရသည်။
[Los Angeles News] ၆၃ ကြိမ်မြောက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲအတွက် ဆုတစ်ခုစီအတွက် အမေရိကန် ဂီတလုပ်ငန်းတွင် အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုခံရသည်ကို ၂၄ ရက်နေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ လူမည်း ရိုက်နှက်မှု သေဆုံးပြီးနောက် [Black Lives Are Precious] ဟုခေါ်သော ဆန္ဒပြမှုသည် အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ပြန့်နှံ့သွားပြီး ဇွန်လတွင် ကျေးကျွန်မျ
ENT | MoMo 기자 | 2020-11-25 18:43
ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း 'အနုပညာရှင်များသည် Disneyဇာတ်ကောင်များဖြစ်လာပါက ဘယ်လောက် ထပ်တူကြမလဲ? 'Taylor Swift၊ Ariana Grande စသည့် နိုင်ငံခြားအနုပညာရှင်များသည် Disney ဇာတ်ကောင်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။Lilo's of Lilo & Stitch's နှင့် Anastasia Scarlett Johansson ၏ Disney ဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ ကျော်ကြားသူမ
ENT | Nang 기자 | 2020-11-25 01:37
Emma Stone သရုပ်ဆောင်ထားသော Cruellaနှင့် Pinocchio ကို Robert Jmeikis နှင့် Tom Hanks တို့ပူးပေါင်းပြီး David Pan နှင့် Wendy တို့က Jude Law တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး David Rowley သည် megaphone ကို ခေါ်ထားသည်။ Disney သည် ရုပ်ရှင်ရုံတင်ခြင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီး Disney Plus တွင် ထုတ်လွှင့်ရန်စီစ
ENT | MoMo 기자 | 2020-11-23 20:06
'Day and Night' သည် လွန်ခဲ့သော ၂၈ နှစ်က ရွာတစ်ရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော လူသတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ပေးသော အဖြစ်အပျက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ရဲအေဂျင်စီ၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Do Jeong-woo အဖြစ် Nam Gung-min သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ Do Jeong-woo သည် ရှုပ်ပွနေသော ဆံပင်နှင့် ပခုံးကုန်းနေသော ပုံစံ၊ ကလေ
ENT | Nang 기자 | 2020-11-23 20:04
'Private Life'သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်မျှဝေခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းခေတ်များ၌ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော လူလိမ်များသည် ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးကို နိုင်ငံ၏ကြီးမားသော 'Private Life'ကို ထုတ်ဖော်သည့် လိမ်လည်မှုဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။အာရှ၊ ဂျပန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင် legendအဖြစ် လူသိများနေဆဲဖ
ENT | Nang 기자 | 2020-11-20 18:18